Ma jiraa khariidad SEO ah oo internetka ah oo iga caawin kara dib u celinta?
Hoosta waxaan kuugu sheegi doonaa sida aad u dooran karto bogga internetka SEO-ka ah si aad uga hortagto dhacdooyinka xun ee suurtagalka ah. Waxaan ula jeedaa dhibaatooyinka ugu caansan ee ku xad gudbaya xeerarka Google, taas oo keeni karta ciqaabaha rikoodhada ama xitaa dhamaystirnaya de-indexing of maamulka domain dhan. Waxyaabaha waa in mashiinnada raadinta ay daawadeen si aan u ogaano wixii xadgudub ah, wax-qabadka, ama nidaamyada casriga ee darajada bogga sare ee SERPs. Waxaa ka mid ah fara-xumada ugu badan, waa la'aanta waxyaabo tayo leh, iyo sidoo kale dib-u-qaabeyn aan cadaalad ahayn. Taasi waa sababta fikrad macquul ah in mar walba isha lagu hayo geeddi-socodka dhismaha dabiiciga ah ee bogga internetka. Sidaa oo kale, waxaad u baahan doontaa inaad doorato website-ka saxda ah ee SEO-ka ah ee interneetka. Waxaa jira qalab aad u tiro badan oo la mid ah oo loo heli karo helitaan furan. Marka, sidee loo sameeyaa doorasho sax ah oo dhan?
Aan ka bilowno waxa ubaahan baahidaada marka hore iyo ugu horreyn. Waxaan kugula talinayaa in aad labadiinaba isku deldesho waxyaabaha asaasiga ah:
Xiriirintaada taariikhda ugu yaraan saddex bilood
Daraasad qotodheer oo ku saabsan xiriiriyahaaga xirmada
) Ilaha dib-u-qabsigaaga
Hubinta qaaska ah ee nooc kasta oo xiriir ah oo aad haysato
Marka, si looga hortago ciqaabaha Google ee dib-u-caddaalad aan xaq ahayn, waxaan kugula talineynaa in aan tixgeliyo website-ka SEO Qalabka falanqaynta ee soo socda: Serpstat, Ahrefs, Majestic, or Analyteth Analyzer. Sida aniga ahaan, waxaan ku talineynaa in la ilaaliyo backlinks domainka toddobaadle ah, ama ugu yaraan hal mar labadii toddobaadba mar. Isticmaalidda jeeg kasta oo internetka ah oo internetka ah Waxaan ku soo sheegnay ka hor inta aanu kaa caawin kareyn inaad adigu xallisid nidaamka si isku mid ah, oo ku dhawaad ​​buuxa.
Si loo kormeero dib u eegista xitaa si deg deg ah oo sahlan, aan u eegno hubinta xiriirka caadiga ah qaadashada falanqaynta Backlink by Serpstat ee tusaalaha ugu caansan. Si loo kormeero qiimeynta asaasiga ah ee guud, waxaan kaliya u baahanahay inaan booqano bogga rasmiga ah ee bogga internetka ee adeeg bixiyahaaga internetka. Marka aan galno magac domain ah oo u baahan xaqiijinta, waxaa la siin doonaa warbixin kooban oo ku saabsan ogaysiiska gaaban. (Fiiri bogga 1)
Tirada guud ee backlinks
Taariikhda ugu dambeysa, oo soo koobeysa dhammaan wixii cusbooneysiin ah iyo isbeddelada, taas oo ah wuxuu dhacay intii lagu jiray muddadii ugu dambaysay ilaa seddex bilood
liis kooban oo xiriir ah oo lagu kalsoon yahay oo ka imanaya qaybaha domainka ee awoodda ugu xooggan sida. edu ama. iyo sidoo kale inta badan mashiinnada raadinta ee ugu horreeya, sida Bing iyo Yahoo
liiska digniinta gaarka ah oo kooban oo kaliya oo dhowaan la abuuray oo dhawaan la lumay, labadaba dareenkaaga iyo
Jadwalka ugu dambeeya ee taraafikada ee kuxiran boggagaaga soo gudbinta muddada u dhaxaysa sadex bilood
Liistiyada caadiga ah ee kaganacsigaaga, iyo sidoo kale tiradooda guud
Qiimeyn la soo koobay oo ku saabsan qaabka boggaga dib-u-qabsiga, oo lagu qiyaasay by Serpstat inuu yahay tilmaame ku kalsoon. Sidan oo kale, waxaan ka filan karnaa falanqeyn farsameed oo casri ah oo leh websaytka caadiga ah ee SEO-ga internetka si aan u qaadano wax ka badan 10-15 daqiiqo. Sidii aan hore u soo sheegnay, waxa kaliya ee adiga kugu habboon inaad doorato qaabka falanqaynta gadaal ka mid ah mid ka mid ah afartaas qalabka loo yaqaan ee bilowga. Sida aniga ahaan, waxaan ka helay jeegareeyaha boggayga ugu dambeyn onlineka iyadoo la adeegsanayo qalabka Serpsat. Iyo sidoo kale waxaad isku dayi kartaa inaad ka faa'iidaysato Naqshadeeyaha Semetarka, xitaa qulqulka xitaa qulqulaya qaabka maalinlaha ee boggaaga Source .